'एजुकेसन कि स्कूलिङ' बहसमा सहभागी मत - मिश्रित प्रणालीको पक्षमा | मझेरी डट कम
editor — Sun, 11/10/2013 - 17:20
मानवको अन्तर्हृदयमा ज्ञान छोपिएर रहेको हुन्छ । त्यसलाई बाहिरी दुनियाँको सूचनाले मात्र उघार्न सकिन्न । विनाचिन्तन(मनन शैक्षिक जगत्मा परिवर्तन सम्भव छैन । अँध्यारो ठाउँबाट उज्यालो ठाउँमा एक्कासी पुग्दा आँखा तिरमिराउँछन् । असमञ्जस्यताको अवस्था सिर्जना हुन्छ । एउटा कडा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यस उज्यालोलाई आफूभित्रको उज्यालोले हराउन सकियो भने मात्र आँखा खोल्न सकिन्छ । नत्र बन्दको बन्दै राख्नुको विकल्प हुन्न । सिकाइको संसार पनि त्यस्तै हुन्छ । अरूको उज्यालोले आफूभित्रको उज्यालोलाई पराजय गरिउन्जेल सिकाइ ठप्प हुन्छ । आफूभित्र ज्ञानको दीप बाल्न सकियो भने मात्र सिकाइ गन्तव्य उन्मुख हुन्छ । हालसम्म प्रचलित शैक्षिक मूल्य र मान्यता, नीति र नियम अनि शैक्षणिक परिपाटीले सिकारूभित्रको उज्यालोलाई चिनेको छैन, जानेको छैन । शिक्षकहरू पनि त्यही आधारभूमिमा पाइलो टेकेर सिकारूको ऊर्जावान् अवस्था धुमिल पार्न र सन्त्रास फिँजाउन मात्र सिपालु नाट्य अभिनेता/अभिनेतृ सावित भएका छन् । आजको शिक्षा सिकारूलाई बुद्धिमान् बनाउन हैन जडबुद्धिवाल बनाउन तत्पर र समर्थवान सावित भएको छ । यस किसिमको परिस्थिति कसरी सिर्जना किन भएको हो भनी कारण जान्न र बुझ्न खोज्दा जड स्कूलिङ प्रणालीमा गएर रोकिनुपर्छ । सम्पूर्ण शैक्षिक बेथिति स्कूलिङ जडतामा अल्झेको छ ।
(ख) के हो स्कूलिङ र एजुकेसन ?
अनौपचारिक तवरले औपचारिक/अनौपचारिक ज्ञान लिने प्रणाली एजुकेसन हो भने अनौपचारिक तवरले जानकारी लिने प्रणाली स्कूलिङ हो । यी दुबै प्रणाली सिकारुका निम्ति उत्तिकै आवश्यक छन् । सिकाइको सुरुआतमा स्कूलिङले मद्दत पुर्याउँछ भने उमर बढ्दै जाँदा, शारीरिक र मानसिक विकास हुँदै जाँदा एजुकेसनले स्थान भेट्दै जान्छ । ‘क ख ग..., अ आ इ..., ब् द्य ऋ म्..., १ २ ३ ४..’ सिकाउनु र घोकाउनु स्कूलिङअन्र्तगत पर्छ भने तिनकै जगमा ‘क का कि की..., ऋब्त्..., दुनाई’ आदि सिक्न सिकारु स्वयम् तत्पर हुनु र सोधखोज गर्न थाल्नु एजुकेसनको लक्षण हो ।
एजुकेसन-सिकाइको क्षेत्र असीमित हुनु, सिकारु स्वयम् सिकाइ यात्रामा सरिक रहनु, ज्ञान शिक्षक र पुस्तकमा मात्र सीमित नरहेको ठानिनु आदि ।
स्कूलिङ-सिकाइको क्षेत्र सीमित हुनु, सिकारु सिकाइका लागि शिक्षक र पुस्तकमा निर्भर रहनु, ज्ञान शिक्षक र पुस्तकमा नै सीमित रहेको ठानिनु आदि ।
(घ) श्रेष्ठ अवधारणा तथा सुधारका निर्णायक सवालहरू
जड सोच जहिल्यै पनि घातक हुन्छ । एजुकेसनको उदारपन र स्कूलिङको सङ्कीर्णपन दुबै सिकारुका निम्ति घातक सिद्ध हुने भएकाले निम्न लिखित अवधारणा अपनाएर शिक्षा लिने र दिने मिश्रित व्यवस्था हुनु जरुरी हुन्छ -
(१) धनोपार्जनमुखी हैन आत्मीय सुखका लागि शिक्षा हुनुपर्छ-शिक्षाले व्यक्तिमा सीपको विकास गराउनुपर्छ । अहङ्कारको दमन गर्नुपर्छ । सफल र सुखी प्राणी भएको बोध गराउनुपर्छ । आत्मविश्वासी र आत्मसाहसी पार्नुपर्छ । समग्रमा शिक्षाले व्यक्तिलाई आत्मीक सुख दिनुपर्छ । आजको शिक्षामा यस किसिमको गुण छैन । आजको शिक्षाले धन कमाउन आकर्षित गर्छ । धन आर्जन गरेर सुख मिल्छ, जीवन धन्य बन्छ, लोकमर्यादा उच्च रहन्छ भने सन्देश सम्प्रेषण गर्छ । धन कसरी कमाउने त्यसको उपाय सिकाउँदैन, धन कमाउने सीप दिँदैन तर धन कमाउनु नै अन्तिम अभिष्ट हुनुपर्ने एकोहोरो बोध मात्र गराउँछ । त्यसैले शिक्षित मान्छे नै नैतिक भ्रष्ट छन् । बरू तुलनात्मकरूपमा अशिक्षित मान्छेहरू नै समाजमा नैतिकवान् भएर देखिएका छन् ।
(२) शिक्षा अहङ्कार जन्माउने हैन प्रेम, सहानुभूति र आत्मीयता आर्जन हुने हुनुपर्छ-शिक्षित व्यक्ति ज्ञानी, दयालु र स्नेहालु बन्नुपर्नेमा कतिपयले चाहिँ उल्टै आफूलाई विज्ञ ठान्छन् । आफूलाई गौरवशाली महापुरूष सम्झन्छन् र अरूलाई सामान्य हैसियतका समाजका सदस्य मात्र ठान्दछन् । आजका शिक्षित मान्छे नै झगडालु र षडयन्त्रकारी हुनु यस कुराको पुष्टि हो । आजको शिक्षाले व्यक्तिको मनमा उम्रेको प्रेम, सहानुभूति र स्नेहको बिरूवालाई मलजल दिन र पाउन वञ्चित गरेको छ । फलस्वरूप व्यक्ति अहङ्कारी भएको छ । त्यसैले मान्छे मान्छेबाट त्रस्त छ, बेचैन छ ।
(३) प्रतिस्पर्धामा आधारित निरस हैन होससहितको जोसिलो हुने शिक्षा हुनुपर्छ-कसैको शैक्षिक अनुभव र क्षमतालाई अर्कासँग दाज्नु उपयुक्त हुँदैन । धर्तीमा आएका हरेक प्राणीसँग आ(आफ्नै खालका नैसर्गिक गुणहरू विद्यमान हुन्छन् । ती गुणलाई पन्छाएर अर्कालाई उछिन्न तैँले यसै गर्नैपर्छ भनेर बाध्य बनाउँदा बालबालिकाको मनमा अरूलाई उछिन्नु र जित्नु नै शिक्षा रहेछ भने गलत विचार पैदा हुन्छ । यसबाट उनीहरूको जीवन भ्रमपूर्ण बन्दछ । अर्कातिर अर्कालाई जित्नकै लागि आफ्नो सामथ्र्यले काम गर्न नसकेपछि चिट चोर्ने काम हुन्छ । यस्तो चोरी गर्ने प्रथा एक किसिमको महारोग भएको छ । यसको मूल जरो पहिल्याउँदै जाने हो भने प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षिक परिपाटीसम्म पुगेर टक्क अडिनुपर्दछ । अत: आपूmमा अन्तर्निहित कलुषित भावनालाई अतिक्रमण गरी निर्मूल पार्न सिकाइ सक्षम हुनुपर्छ, प्रतिस्पर्धाको पछि लाग्ने खालको बन्दै हुनुहुन्न ।
(४) वृतकारीय शिक्षा हैन अग्रगामी मार्गनिर्देश शिक्षा हुनुपर्छ :- आजको शिक्षा वृतकारीय छ । जति पढे पनि, जति बढे पनि सिकाइको वृत वरपर नै घुमिरहेका हुन्छौं । सिकाइका सोपानहरू उक्लेर उध्र्वगामी पथ पक्रनु पर्नेमा एउटा चक्रमा फनफनी घुम्नु पर्नाका कारण के हो भने हामी आफ्नाअनुसार शिक्षा दिँदै छौँ । सिकारूको रूचि, आकाङ्क्षा र समयको माग बमोजिम शिक्षा दिन विल्कुलै पछि छौँ । जहिलेसम्म हामी एउटै वृत्तमा फन्को लगाइरहन्छौं, तहिलेसम्म हामीमा नवीन सोचको विकास हुँदैन । शिक्षाले सिकारूमा प्रज्ञाको ज्योति बाल्नुपर्छ । त्यो नभई जुन दीप बालिएको थियो, त्यसको प्रकाशमा तेज भर्ने काम मात्र अघिल्ला कक्षाहरूले गर्ने गरेका छन् । विषयवस्तुलाई निश्चित कोणबाट मात्र हेर्ने कार्य गर्नाले र एकै नासको शिक्षण विधि प्रयोगमा ल्याउनाले पनि एउटै वृतमा फनफनी घुम्नु परेको हो र उपलब्धी हात नलागेको हो ।
(५) शिक्षक हतियार हैन सिकाइको अभिभावक हुने शिक्षा रहनुपर्छ-विद्यार्थीलाई त्रासमा राखी कज्याउने रणनीति आजको शिक्षा नीतिभित्र छ । शिक्षकलाई मुढेबल प्रयोग गर्न वाध्य पारिन्छ । शैक्षिक नीतिनियमका बारेमा कागजमा जे जति राम्रा र हाम्रा कुरा लेखिए पनि सामाजिक ढाँचामा शिक्षकलाई समाजले हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको छ । सधैँ अघि हुन, सधैँ सफल बन्न, सधैँ उत्तम अङ्क ल्याउन र सधैँ अरूलाई उछिन्न शिक्षकले विद्यार्थीलाई प्रेरित गरिरहनुपर्छ । उनीहरूको प्राकृतिक स्वभावको प्रतिकूल गएर शिक्षकले नै समाजको सोच अनुकूलको बाटोमा लग्नुपर्छ । एक किसिमले जे सिकायो, त्यही सिक्ने र जे गर्न लगायो, त्यही र त्यति मात्रै लुरूलुरू गर्ने जड मनस्थितिका विद्यार्थी उत्पादन गर्न सक्यो भने त्यो सफल शिक्षक मानिन्छ । विद्यार्थी अराजक गतिविधिमा लागे ज्ञान दिने मान्छेले नै गोरू चुटाइ चुट्न बाध्य हुनुपर्छ । त्यसो नगरे संस्थागत र समाजबाट कडाइ नगरेको आरोप बेहोर्नुपर्छ । कुनै पनि अमर्यादित कामको कारकतत्व पत्ता लगाइन्न । हाँगाबिँगा छिमलेर समाधान खोजिन्छ । यस प्रकार शिक्षक हतियार बनेको छ । यसो नभई शिक्षक सिकाइयात्राको अभिभावक बन्नुपर्छ ।
(६) विद्यार्थी केन्द्रमा र शिक्षक परीधिमा रहने शिक्षा चाहिन्छ-आजसम्म शिक्षकले जे पढाउँछन्, विद्यार्थीले त्यही पढ्नुपर्छ । शिक्षक पनि शैक्षिक नीति, निर्देशन, पाठ्यक्रम र पाठयपुस्तकले जे भन्दछ, त्यसै गर्दछन् । सीमित विषयवस्तुमा केन्द्रित रही सीमित जानकारी उपलब्ध गराउँदछन् । शिक्षक केन्द्रमा हुन्छन् र विद्यार्थी परीधिमा रहन्छन् । शिक्षालयमा ज्ञानार्जन गर्ने पक्ष विद्यार्थी नभई शिक्षक भएजस्तो देखिन्छ । यस किसिमको शैक्षिक परिपाटीबाट विद्यार्थीहरूमा उत्साह मरेर जाने अनि शिक्षकमा पनि मनोमालिन्य उग्ररूपमा बढोत्तरी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । अत: विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर आफू परीधिमा रहेर शिक्षा दिने चलनको विकास हुनुपर्छ । यसो भए विद्यार्थीहरूको कलिलो चिन्तनमा मलजल प्रदान हुन जान्छ, चैतन्य शक्ति अभिवृद्धि हुन्छ ।
(७) स्मृति बढाउने हैन बुद्धि बाहिरिने शिक्षा रहनुपर्छ-आजको शिक्षाले सिकारूलाई वुद्धिमान् बनाउन सकेको छैन । पूराना कुराहरू स्मृति गर्न मात्र सिकाउने गरेको छ । स्मृति बढाउन प्रोत्साहित गर्ने, त्यसका लागि विषयवस्तु कण्ठस्थ पार्ने र त्यसैका लागि बरोबर प्रयास गर्नुपर्ने सोचको विकास आजको शिक्षाले दिलाउँछ । यसबाट सिकारु बुद्धिमान् हुन सक्दैनन् । अत: सिकारुमा रहेको चैतन्य सामथ्र्य बाहिरिने प्रकृतिको शिक्षा दिलाइनुपर्छ ।
(८) उत्तरमा सन्तोष लिने हैन जिज्ञासु मन बनाउने शिक्षा चाहिन्छ-हामीसँग प्रचलनमा रहेको शिक्षणविधिले उत्तरमुखी शिक्षण प्रक्रियालाई महत्व दिएको छ । शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापले त विद्यार्थीमा जिज्ञासा जन्माउन सक्नुपर्छ । उनीहरूका जिज्ञासाका विविध खाले उत्तरहरू हुन्छन् । ती उत्तरहरूले विद्यार्थीहरूको जिज्ञासाको द्वार बन्द मात्र गर्दैनन्, प्रश्न उब्जाउने सोचलाई नै वाधा पार्न सक्छन् । पढाउँदा खेरि नै उत्तरमुखी तवरले सीमित विषयवस्तुमा आधारित रही पढाउँदा स्वभाविक रूपले प्रश्न उब्जाउने ठाउँ हुन्न । उब्जाइ हाले पनि शिक्षकले नै निरूत्साहित गर्ने परिपाटीको विकास हुनाले समेत विद्यार्थी स्वयम् उत्तर पाउने र खोज्ने महायात्रामा सरिक हुँदैनन् । त्यसैले त अपूर्ण सिकाइ भइरहेको छ, शिक्षाका उद्देश्य अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छैन ।
(९) ज्ञात कुरा मात्र सिकाउने हैन अज्ञातको बोध गराउने शिक्षा हुनुपर्छ-शिक्षक र शिक्षाले जगत्का ज्ञानगुनका कुराहरू मात्रै सिकाउने परिपाटी छ । ज्ञात कुरा त सबै जसोलाई थाहा हुन्छ । त्यही थाहा भएका कुराहरू प्रत्येक वर्ष दोहोर्याइरहन्छौ । यस अर्थमा ज्ञात भइसकेका कुरा वा ज्ञानले मात्र रहस्यमय जीवनलाई दिशानिर्देश गर्न सक्दैन भन्ने पक्कापक्की छ । अज्ञात रहस्य खोतल्ने खालको काम गर्नका लागि शिक्षा पनि अज्ञात रहस्यको बोध गराउने किसिमको हुनुपर्छ ।
(१०) पोखरीझैँ जम्ने हैन नदीझैँ निरन्तर बग्ने प्रकृतिको शिक्षा हुनुपर्छ-ज्ञान निरन्तर लिँदै जाने कुरा हो । जीवनभरि ज्ञान आर्जन भइरहन्छ । सिकाइको आधार सोही बमोजिम हुनुपर्नेमा त्यसमा अन्यथा भएको भेटिन्छ । सीमित पाठ्यपुस्तकले तोकेको, सीमित पाठ्यवस्तुमा आधारित रहेर शिक्षा दिने परिपाटी छ जसलाई पोखरीको संज्ञा दिन सकिन्छ । पोखरीमा पानी स्थिर भइरहन्छ । त्यही स्थिरताले गर्दा पोखरीमा पानी जमेर गन्हाइरहन्छ । सिकारुले नदीझैँ निरन्तर प्रवाहित हुँदै अघि बढ्ने प्रकृतिको शिक्षा ग्रहण गर्न पाउनुपर्छ ।
(११) अतीत घोकाउने हैन वर्तमान बोध गराउने शिक्षा हुनुपर्छ-आजका सम्पूर्ण पाठ्यवस्तुहरू अतीतमुखी छन् । अतीतमै आधारित छन् । सिकारूको जीवन वर्तमानमा आधारित छ । शिक्षा भने अतीततर्फ फर्किएको हुनाले तालमेल विल्कुलै छैन । अतीतका सूचनाले वर्तमानको जीवनबोध गराउन सक्दैन । वर्तमान जान्न वर्तमानकै सूचना चाहिन्छ । वर्तमान जान्दा मात्रै भविष्यको रथ हाँक्न सिपालु जनशक्ति उत्पादन हुने गर्दछन् । अतीतको सूचनाको पोको फुकाएर वर्तमान पिँढीलाई पुरानै युगमा फर्काउने जमर्को आजको शैक्षिक व्यवस्थामा छ ।
(१२) ज्ञानलाई सीमित मान्ने हैन असीमित ठान्ने शिक्षा हुनुपर्छ-ज्ञानको गहिराइ अपरिमेय छ । तर त्यसलाई निश्चित सामग्री, पाठ्यपुस्तक र पाठ्यवस्तुहरू मार्फत उपलब्ध गराउने कोशिस गरिन्छ । यो काइदा अव्यवहारिक छ । जटिल मात्र हैन, असम्भव छ । ज्ञान दिएर सकिन्न, कसैबाट लिएर पनि सम्भव हुन्न । ज्ञान त आफैँ खोज्नुपर्छ । विद्यार्थी स्वयम् खोज्न प्रेरित गर्ने प्रकृतिको अवधारणा दिलाउन आजको शैक्षिक नीति असफल छ ।
(१३) यथोचित कुरामा विद्रोह सिकाउने शिक्षा हुनुपर्छ-विद्रोहले जिज्ञासाको महासागरमा हेलिन उत्पे्ररित गर्दछ । सन्तोषले तटस्थ भएर यथास्थितिमा नै रहनुपर्ने अवस्थाको बोध गराउँछ । नयाँ कुरा पाउन खोज्नु र युग विपरीतका पुराना कुराहरू निषेध गर्नु अनिवार्य हुन्छ । विद्रोही विचारले नै ज्ञानको सोपान उक्लिन मद्दत गर्छ । ऊध्र्वगामी पथमा सरिक हुनुछ भने ठाउँ, अवस्था र समयमा विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ । विद्रोह विकासका लागि हो, सकारात्मक परिवर्तनका लागि हो ।
(१४) पदमुखी हैन श्रममुखी बनाउने शिक्षा हुनुपर्छ-ज्ञान आर्जन गरेका व्यक्तिहरू जे जस्तो अवस्थामा आए पनि सही ढङ्गले जीवन सञ्चालन गर्न सक्षम हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । ज्ञानी मान्छे, शिक्षित मान्छे कहलिएकाहरू नै पदमुखी छन् । शारीरिक श्रम गर्ने अभिभारा आफ्नो नभएको जिकिर गर्दछन् । अरूलाई कज्याएर नै धन कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छन् । शारीरिक र मानसिक श्रमले जिउने इच्छा धरासायी बनाई पदका पछि दगुर्ने प्रकृतिको शिक्षा अपूर्ण र अधुरो छ ।
(१५) बाहिरका सूचना मात्र कोच्ने हैन मस्तिष्कका कुरा बाहिर ल्याउने शिक्षा चाहिन्छ-अहिलेसम्म प्रचलनमा रहेको शिक्षाले बाहिरका सूचनाहरू विद्यार्थीको दिमागमा प्रवेश गराउँछ । उनीहरू जानकारीले पूर्ण हुन्छन् । शिक्षाको वास्तविक गुण भनेको सिकारूको मनमस्तिष्कमा भएका कुराहरू बाहिर ल्याउनु हो । त्यसो हुन सकेको देखिन्न । बाहिरिया कुरा कोच्ने तर सिकारुभित्र रहेका कुराहरू बाहिर ल्याउन उचित वतावरण प्रदान नहुँदा प्रतिभा प्रष्फुटन हुन सकेको छैन । मौलिक स्वरूप देखाउन पाउने अवस्था सिकारुले पाएका छैनन् ।
माथि उल्लेखित कुराहरू मैले पढेको र पढाएको विद्यालयमा महत्वका साथ लागू भइरहेको पाएकी छैन । समयको माग र नयाँ पुस्ताको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने हो भने ‘एजुकेसन’ र ‘स्कूलिङ’ दुबैका जड कुराहरू त्यागी अग्रगामी चिन्तनलाई प्रश्रय दिनु जरुरी ठान्दछु ।
शिक्षा दिँदा र लिँदा उदार भावना अपनाउनुपर्छ । उदारताको नाममा अराजकतालाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने बुझ्नु हुन्न । एजुकेसन प्रणालीले स्वतन्त्रताको अत्यधिक वकालत गर्छ । स्कूलिङले जडतालाई पृष्ठपोषण गर्छ । यी दुबैलाई मिश्रण गरी बनाइएको मिश्रित प्रणाली नै नेपाली समाजमा सुहाउँदो हुन्छ । प्रयोगात्मक शिक्षामा जोड दिनु आवश्यक छ । लेखपढ गर्नु भनेको जीवनका लागि हो भन्ने भावना जागृत हुनुपर्छ । समाजका सचेत वर्गले नयाँ सोच र जाँगरका साथ मौलिक प्रकृतिको मिश्रित शैक्षिक प्रणालीमा जोडतोडका साथ सक्रिय रहनु अनिवार्य छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
लिटिल फ्लावर सेकेण्डरी स्कूल, लोकमार्ग किनार, रूपनगर - ७, प्रगतिटोल, सप्तरी ।
मिति : ०७०.०७.०७
त्यहीँ छ सारा दुःखको विनाश
ङा केबु ठौ
म खाते बालक
झुक्दैनन् नेपाली कसैसँग
तिमीसँगको भेटले उमंग छायो
जन्म–मरणका कष्टदायी समयहरू
एउटै बाटो सधैं
फेरी त्यो दिन. by Dev...
रुवाउने प्रेम क्षणिक हो
ह्वाईखा (तामाङ कविता)
कोहलपुरमा बृहत कवि गोष्ठी सम्पन्न
जिन्दगी ... ?
देशको मुहार फेरौ
ओशो छहारीमा पुग्दाको एक अनुभूति
पूर्णिमाको १०४ औ विशेष शृङ्खला
अँध्यारो, मेरी आमा र अगेनो
ब्रुनाईका सात दिन
मुसी को बिहे